Xasan Sheekh, Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin mucaarad ah oo ka shiray Xaaladda dalka +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Warar Cusub Xasan Sheekh, Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin mucaarad ah oo ka shiray Xaaladda dalka...
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin mucaarad ah ayaa waxa ay ka shireen xaaladda dalka iyo marxaladda isbedelka ah ee uu dalka galayo xilligaan.
Waxaa shirkan guddoominaayay Guddoomiyaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD ahna Madaxweynihii sideedaad ee JF Soomaaliya mudane Xasan Sheekh, waxaana masuuliyiintaan ay iska wareysteen isbedelka Siyaasadeed ee dalka ka dhacay.
Xubnahan ayaa ka dooday sida ay muhiim u tahay in la illaaliyo midnimada iyo wadajir ka umadda Soomaaliyeed, isla markaana laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed ama amni oo xilligaan dalka cagaha uu la galo.
Sidoo kale, shirka ayaa looga hadlay marxaladda kala guurka ah ee dalku marayo iyo sida ugu haboon ee dalka ay uga dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo xilligeedii ku qabsoonta.
Xubnaha isugu yimid Shirkaasi, ayaa waxay isla garteen in lagama maarmaan tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho.
Ugu dambeyn, Kulanka ayaa laga soo saaray baaq ku aadan in si wadajir ah looga shaqeeyo samatabixinta dalka iyo abuurista jawi xasillan oo suurogelin kara wadatashi si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo lagu maareynayo marxaladaan kala guurka.